WinaTrip to International Champions Cup 2019 in Singapore! – MOB Bank
MPU Debit Card
MPU Credit Card
MPU/UPI Co-branded Credit Card
နိုင်ငံဝန်ထမ်းများနှင့် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ ချေးငွေဝန်မှု‌‌‌ဆောင်မှု လုပ်ငန်း
နိုင်ငံခြား ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ (စာရင်းရှင်)
Correspondent Bank List
+၉၅ ၁ ၂၅၁ ၈၄၀
+၉၅ ၁ ၂၅၁ ၈၀၁ - ၄
MOB Card လက်ခံဆောင်ရွက်သောဝန်ဆောင်မှု
JICA SME နှစ်ဆင့်ချေးငွေ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
Import/Export Letter of Credit
ဘဏ်အာမခံ (ပြည်တွင်း နှင့် ပြည်ပ)
FCY Local A/C Transfer Service
USD Credit Facility
Internal Draft & Cheque Purchase (IDCP)
Board Roles and Director Policies
Board Level – Credit & Risk Committee (BCRC)
Management Level – Credit Committee (MCC)
Management Level – Risk Committee (MRC)
Management Level – Executive Committee (EXCO)
Management Level – Asset & Liability Committee (ALCO)
Our Correspondent Bank
WinaTrip to International Champions Cup 2019 in Singapore!
MOB Bank > သတင်းများ > Uncategorized > WinaTrip to International Champions Cup 2019 in Singapore!
ဧပြီ 11, 2019
UnionPay International မှ Premium Sponsor အဖြစ်တာဝန်ယူထားသည့် International Champions Cup(ICC) Singapore 2019
[vc_row el_id=”Post”][vc_column][vc_column_text] တွင် နာမည်ကြီးဘောလုံးအသင်းများဖြစ်သည့် English Premier League နှင့် Italian Series A မှ European Clubs တို့မှ ဇူလိုင်လ ၂ဝ၊၂၁ ရက်နေ့များတွင် ပါဝင်ကစားကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
အထူးအစီအစဉ်အဖြစ် MOB UPI Co-brand Credit Card ကိုင်ဆောင်ထားသူများအနေဖြင့် ၂၀၁၉ ဧပြီလ ၁၅ရက် နေ့မှ စတင်ပြီး ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့အတွင်း နိုင်ငံတကာရှိ UPI Merchant များတွင် ဈေးဝယ်ယူ သုံးစွဲထားသူများအနက်မှ အများဆုံးသုံးစွဲသူ (Top Spender) တစ်ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အဆိုပါ Top Spender အနေဖြင့် 21st July 2019 တွင် ကျင်းပမည့် Tottenham Hotspur Vs Juventus တို့ပါဝင်ကစားမည့် Match2သို့ အဖော်တစ်ဦးနှင့်အတူ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည့် အခွင့်အရေးကို ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ UnionPay မှ –
စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ အသွားအပြန် လေယာဉ်လက်မှတ် (၂x)
The Fullerton Hotel Singapore တွင် (2) ညတည်းခိုခွင့် (၂x)
S$400 တန်ဖိုးရှိသည့် ICC Match2 ပွဲကြည့်ရှုရန် လက်မှတ်အမျိုးအစား တစ်စောင်စီ (၂x)
အစရှိသည့် ခံစားခွင့်များကိုပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။[/vc_column_text][vc_single_image image=”9692″ img_size=”640px” onclick=”img_link_large” img_link_target=”_blank” el_id=”Football”][vc_column_text el_id=”Post”]ဤအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်လိုသူများအနေဖြင့်-
MOB UPI Co-Brand Credit Card များကို ကိုင်ဆောင်အသုံးပြုသူဖြစ်ရပါမည်။ (MOB မှဝန်ထမ်းများပါဝင်ခွင့်မရှိပါ)
မည်သည့် UPI oversea Merchants များတွင်မဆို ၂၀၁၉ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၅ရက်နေ့မှ ဇွန်လ ၁၅ရက်နေ့အတွင်း ဈေးဝယ်ယူ သုံးစွဲခြင်း ဖြင့်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ (ပြည်ပ Point of Sales (POS) စက်များတွင် ဈေးဝယ်ယူခြင်းသာ အကျူံးဝင်ပြီး ATM မှ ငွေသားထုတ်ယူမှုများ၊ ငွေသားလွဲပြောင်းမှုများ၊ Reversal transaction များ၊ MPU ဖြင့်ဈေးဝယ်ယူခြင်းများ အကျူံးမဝင်ပါ။)
ရွေးချယ်ခြင်းခံရသော အများဆုံးသုံးစွဲသူ (Top Spender) ကို ဇူလိုင်လ ပထမအပတ်တွင် မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ် Website နှင့် Facebook pageများတွင် ကြေညာပေးမည် ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ E-mail ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဖုန်းဆက်၍လည်းကောင်း အကြောင်းကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဝ၁-၂၅၁၈ဝ၁/၈ဝ၂ သို့မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]